Izvo zvinhu zvekugezesa murabhoritari
Mubvunzo wekutanga: Inguva yakadii yaidikanwa kusuka mabhodhoro mune rimwe zuva rekutsvaga kwesainzi? Shamwari 1: Ndakaita iyo yepamusoro-tembiricha organic mvura chikamu synthesis kweinenge gore nehafu, uye zvinotora ingangoita 1 awa kugeza mabhodhoro zuva rega rega, ayo anoverengera 5-10% yekutsvaga kwesainzi ...
Kuchengetedzwa kwezvizoro zvinoenderana nekujeka kwekuyedzwa
Mafuta machena, masiki ekumeso, mafuta ekuchengetedza ganda, dhayi rebvudzi… Mazuva ano, kune zvigadzirwa zvakasiyana siyana zvekushambadza pamusika uye zviri kubuda zvisingaperi, zvinofarirwa zvikuru nevanoda runako. Nekudaro, zvipodaidzo zvinoshandiswa pekutanga kuchengetedza ganda uye kunatsiridza ganda uye ...
Imba yekuchenesa sipo haigone kushandiswa murabhoritari
Unosarudza sei kuchenesa sipo ye otomatiki magirazi ekushambidza? Ma laboratori mazhinji akashongedzerwa nemidziyo yakawanda yepamusoro yekuyedza vakaona kuti dzimba dzekuchenesa dzimba dzinoshandiswa kuchenesa marata egirazi. Izvo zvakajairika kugadzirira yako wega acid kana kushandisa isina chokwadi aci ...
Ding, ding, bang, yakaputsa imwe, uye ichi ndicho chimwe chezvishandiso zvakajairika murabhoritari yedu, girazi. Kuchenesa magirazi uye kuomesa sei. Pane zvakawanda zvaunofanira kuteerera panguva yekushandisa, iwe unoziva? Iko kushandiswa kweyakajairika giraziware (I) Pipette 1. Kurongwa: Imwe chete mamaki pombi ...
Nekuvandudzwa kwehupfumi pamwe nenzanga, kuitira kuzadzikisa zvido zvakasiyana siyana, saka maindasitiri kana minda senge CDC, kuyedza chikafu, makambani emishonga, masainzi ekutsvagisa, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, sisitimu yemvura, masisitimu petrochemical, masystem emagetsi, nezvimwe zvese ...
Iyo inoverengeka coronavirus denda iri kuramba ichipararira, mamwe marapuratifomu ezvekurapa anotanga kushandisa otomatiki rabhoritari washer.
Hangzhou Maseru eMusika Anotarisira manejimendi Director Liu Feng akashanyira kambani yedu uye ane hanya nekutangazve kwekugadzirwa mushure mekufungidzira koronavona.
Musi waMarch 16, Hangzhou Municipal Market Supervision Administration Director Liu Feng akauya kukambani yedu kuzoona nezve kutanga kwemabhizinesi. Kubva pakatanga ...